Mombamomba – Blaogin'i Voniary
Ny blaogin’i Voniary dia vokatry ny fiaraha-mientan’ny olona te-hanandratra ny maha-Malagasy. Tanjonay ny hanintona ny olona hiaina ny maha-Malagasy amin’ny fomba rehetra: hatrany amin’ny foto-pisainana, ny sakafo, ny boky ary hatraty amin’ny aterineto. Izany no ametrahanay fanamby hanolotra ny tsara indrindra hatrany, na amin’ny lahatsoratra na amin’ny sary. Ireto ary izahay no miara-misalahy ato amin’ny blaogy.
Mpandàla ny fijery miabo efa hatramin’ny ela aho, ka mitsidika isan’andro ireo takelaka mivoy izany mba hanentana ahy amin’ny izay ataoko rehetra. Amin’ny teny anglisy hatrany anefa ireo tranonkala ireo ka teo no nitsiry ny hevitro hamorona blaogy miteny gasy ranoray. Iriko ny hizara izay fahalalana sy traikefa ananako mba hanairana ny hambom-pon’ny Malagasy. Ny foto-kevitra tiako avohitra ato dia ny fiovan-toe-tsaina, ny fitiavan-tanindrazana ary ny fandrosoana amin’ny maha-olona manontolo.
Ny sary sy ny mozika no fanehoako ny maha-Malagasy ahy. Ao anatin’ny fijery misokatra anefa izany satria tsy voatery ho vakodrazana na sary olona mamboly vary no atao hoe Malagasy. Ny Rap gasy dia anisan’ny mijoro sy mitolona ho an’ny teny Malagasy, ka izay no ankafizako azy. Ny sary indray, tiako ny maka sary na dia tsy matihanina aza aho, fa ankafiziko indrindra ny mikirakira ireo rindrambaiko mikasika ny sary. Tiako ho fantatry ny rehetra fa mahavita zavatra tsara isika Malagasy .
Ankoatra ny eto amin’ny blaogin’i Voniary dia mandray asa hafa koa izahay mikasika ny:
Famoronana lahatsoratra, dokambarotra, tantara amin’ny teny gasy na frantsay
Fandikana lahatsoratra: teny anglisy sy teny frantsay ho amin’ny teny Malagasy na teny Malagasy ho amin’ny teny anglisy sy teny frantsay
Famoronana sary famantarana sy sary fanaovana dokambarotra (graphic design)
Fikirakirana sary (retouching)
Raha tianao ny zavatra atolotray eto amin’ny blaogin’i Voniary dia manainga anao hatoky anay koa amin’izay fangatahanao aminay. Aza misalasala mifandray aminay:
Finday: +261 33 73 477 93